Xannaanada Caruurta : Child Care Resources: Partnering for School Success : Family : University of Minnesota Extension
Extension > Family > Partnering for School Success > Child Care Resources > Xannaanada Caruurta
Markaad caruurtaada uga tagtid qof kale, ha ahaado qoys kale, xannaano caruur, qaraabo, ama saaxiib, waxa ugu muhiimsan oo niyadaada dejin kara waa kalsoonida. Markastoo kalsooni aad ku qabtid xannaaneeyaha siyaadaba, waxaa ku degaysa niyadaada. Hadaba su'aalaha hoos ku qoran baad u baahantahay in aad iswaydiisid.
U koriyaa caruurta sidaada oo kale? Ma loo tababarey in uu fahmo waxa ilmuhu qaban karaan iyo waxay rabaan in ay sameeyaan da'kastoo ay ku jiraan? Ma geliyaa Waqti in uu hayo, la ciyaaro, lana hadlo caruurtaada? Ma hayaa waqti uu ku ilaaliyo caruurta uu kuhayso xannaanada? Ma soo dhaweeysaa waalidiinta waqti kasta?
Xaruntu ama gurigu maleeyahay...
Shati? Caruur tiro yar? Ogow, ciyaalka yaryari waxaa u fiican markay yihiin koox yar. Maleeyahay muuqaal qurux badan oo nadiif ah? Qalab shaqeynaya lana dayactirey? Cunto iyo cabitaan nafaqo leh?
Ilmuhu fursad ma uhelaan in...
La kor loo hayo, laabto lagu qabto, la ruxo, loo dhoolo caddeeyo, la ursado, lana hadlo? Ay nastaan markay u baahan yihiin? Ay guur-guurtaan, ayna falaadaan iyagoo bad qaba? Ay ciyaaraan walxaha horumariya dareemadooda taabashada, araga, iyo maqalka, sida muraayadaha, qulux-quluxa, waxyaabaha la tuujiyo, digsiyada, ama boombalayaasha jilicsan? Uu xannaaneeyuhu baro luqada isagoo lahadlaya una sheegaya waxa ilmuhu sameynayo isla markaana ka ficil qaadaneya waxa ilmuhu ku dhaqaaqayo?
Tarbiyeynta Wanaagsan: Hagaha Waalidka — Provides busy parents with practical ideas that support school success, parent involvement, and more effective parenting.